Amanqaku kaLarizza de Vera Martech Zone
Amanqaku ngu ULarizza de Vera
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, kubekho utshintsho olukhulu kwindlela esisebenzisa ngayo i-intanethi kwintengiso yedijithali. Siqale ekudaleni nje iwebhusayithi ukuza kuthi ga ngoku ukusebenzisa idatha kunye nomsebenzi womsebenzisi. Ngokhuphiswano olukhulu kwindawo yedijithali, ukuba newebhusayithi ayizukuyinqanda ngokulula. Abathengisi bedijithali kufuneka bayonyuse umdlalo wabo ukuze babonakale kwindalo yanamhlanje eguqukayo. Ukuthengisa kwihlabathi ledijithali kwahluke kakhulu
Isikhokelo kubarhwebi malunga neLungelo lobuNini beNgqondo (IP)
NgeCawa, Oktobha 11, 2020 NgoMgqibelo, Oktobha 10, 2020 ULarizza de Vera
Ukuthengisa yinto eqhubekayo. Nokuba ulishishini okanye ishishini elincinci, ukuthengisa yeyona ndlela ibalulekileyo yokugcina amashishini eqhuba kunye nokunceda ukuqhuba amashishini aye empumelelweni. Ke kubalulekile ukuba ukhusele kwaye ugcine igama lophawu lwakho ukuze umisele umkhankaso wentengiso ogudileyo kwishishini lakho. Kodwa ngaphambi kokuza nomkhankaso weqhinga lokuthengisa, abathengisi kufuneka baliqonde ngokupheleleyo ixabiso kunye ne